Friday March 25, 2022 - 21:01:14 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Waxa la gaadhay dhamaadkii mudada Liisanka xisbiyada qaranka oo ah 10 sano, mana laha wax mudo kordhin ah oo Xeer Lr.14, jideeyay, doorashana ma gali karo Xisbi uu ka dhacay liisankii sharciga ahaa.
Mudada hawlgalka ururada siyaasadda waa 6 bilood gudahood waqtigana waxa cayimaya Guddida Diiwaangalinta Ururada iyago la tashanaya KDQ. Inta lagu gudajiro hawlgalka ururada/xisbiyada lama gali karo doorasho kale aan ka ahayn tan Ururada iyo Axsabta.
Ururada soo gudba ee ogolaanshaha ku meel- gaadhka ah la siiyey iyo 3dii Xisbi, ayaa liiskoda loo gudbinayaa Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo hawsha kala wareegi doona Gudida Diiwaangalinta.
KDQ waxay tartan doorasho toosa u qaban doonaan Ururada cusub iyo Saddexda xisbi ee hore u jiray. Maalinta la qabanayo doorashada waxa cayimaya KDQ sida uu dhigayo Xeer Lr. 14/2011, Waxaana ku tartamaya Doorashada Madaxtooyada Sadexda Xisbi ee soo baxa, isla markaana la siiyo Liisanka Xisbinimo ee 10 ka sano ee soo socda.
Xisbiyada Mucaaridka waxan leeyahay waxba yaan xaska dabada lagalin, Labada doorashaba (Ururada & M/tooyada) waa lagu tartamayaa, Xisbiga wax islahaya ee kalsoonida taageerayashiisa isku hubaa ha yimaado garoonka.
Ninkay ugartaan iyagu"
Xukuumadda Madaxweyne Biixi waxay ku amaanan tahay in dhaqaalahii lagu qaban lahaa doorashooyinka ay meel ku tiirisay, xataa hadii la waayo ta beesha caalamka.
Danta Somaliland waa in Doorasho kasta waqtigeeda lagu qabto.
Qalinkii: Mohamed Gacayte